संसदको परीक्षाको घडी सुरु | eAdarsha.com
संसदको परीक्षाको घडी सुरु
१. नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित संघीय संसदका सदस्यहरुले काठमाडौंको संसद भवनमा आइतवार आयोजित विशेष समारोहमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा अधिकांश सांसदहरु दौरा सुरुवाल र कोट लगाएर सरिक भएका थिए भने केही आफ्नै जातीय भेषभूषामा सजिएर आएका थिए। संसद भवनको समारोह रंगिन देखिएको थियो।
२. सांसदहरु विशेष खुशी देखिन्थे। यसमा पनि एमालेका सांसदहरु अरुभन्दा बढी नै उत्साही देखिन्थे। काङ्ग्रेस सांसदहरुमा भने निर्वाचनमा पराजित भएको पीडाबोध प्रष्ट देखिनथ्यो । नयाँ सांसदहरु उत्साहका साथ जिज्ञासा र कौतुहलतामा देखिन्थे भने पुरानाहरुमा आत्मविश्वासको भाव प्रष्ट रुपमा छचल्किन्थ्यो।
३. संविधान सभाका सदस्यहरुले संविधान निर्माण गरे भने अबका सांसदहरुले सो संविधान अनुसार ऐन कानून र नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। सांसदहरुले यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई भविष्य निर्माता पनि भन्ने गरिन्छ। अबको पाँच वर्ष सरकारलाई , देश र जनतालाई कहाँ कसरी लग्ने, त्यो काम सांसदहरुको हो।
४. विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूको समीकरण कहिले कुन पार्टीँग र कहिले कुन पार्टीँग हुने गरेको थियो। पार्टीका समीकरण फेरिए अनुसार सांसदहरु पनि फेरिनुपर्ने भएबाट सरकारहरु छिट्छिटो गठन र विघटन हुने गरेको थियो। त्यसले गर्दा सरकारमा अस्थिरता आएको थियो र अस्थिरताको कारण देशको विकास हुन सकेको थिएन।
५. अबको स्थिति त्यस्तो छैन। संसदमा वाम गठबन्धनको बहुमत छ। त्यो बहुमतलाई अरु सुदृढ बनाउने प्रयास जारी छ। त्रिशंकु संसदको रोग समाप्त भएको छ। सत्तारुढ दल मजबूत अवस्थामा छ। विकास निर्माण समृद्धिका लागि काम गर्न सरकारलाई बाटो प्रशस्त छ र वातावरण अनुकूलको छ।
६. संसदले अब सबभन्दा पहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्दछ। सरकारले जति धेरै सांसादहरुको विश्वासको मत प्राप्त गर्दछ, उति त्यो सरकार बलियो मानिन्छ। बलियो र सुदृढ सरकारले मात्र राम्ररी योजना बनाएर काम गर्न सक्दछ भन्ने आम धारणा छ। त्यस दृष्टिले यो सरकार निश्चय नै बलियो छ।
७. कामको लागि सरकारको हात बलियो पानै पर्दछ। तर सरकार धेरै बलियो भयो भने एउटा खतरा के पनि हुन सक्छ भने सरकार निरङ्कुश पनि हुन सक्दछ। बहुमतको नाममा अल्पमतलाई पेलेर लाने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ। सांसदहरुको विशेष महत्व त्यसै बेला हुन्छ। उनीहरुले कहिलेकाहीँ विवेकलाई साक्षी राखेर पनि काम गर्नु पर्दछ। निष्पक्ष, निर्भिक र निःस्वार्थ किसिमले काम गर्नुपर्दछ र सरकारलाई सधैं ठीक ट्रयाकमा डोर्‍याउनु पर्दछ। संसदको सफलता त्यसैमा निर्भर रहन्छ। उनीहरुको परीक्षाको घडी शुरु भएको छ।